कैलालीमा बस दुर्घटना,कांग्रेस नेता चौधरीको निधन, १६ जना घाइते ⋆ Palpalko.com::No.One news portal from nepal.
कैलालीको टीकापुरबाट नेपालगञ्जका लागि छुटेको बस बुधबार बिहान करिब ११ बजेतिर जानकी गाउंँपालिका ९ पथरैयामा दुर्घटना भएको छ । बस दुर्घटना हुंँदा नेपाली कांग्रेसका नेता जोधी प्रसाद चौधरीको निधन भएको छ ।
दुर्घटनामा १६ जना घाइते भएका छन् । ना ५ ख ५३० नं. को बस दुर्घटना हुंँदा टीकापुर नगरपालिका १ का ४० बर्षिय चौधरीको निधन भएको हो । चौधरी नेपाली कांग्रेसबाट टीकापुर नगरपालिकाको मेयरका आकांक्षी हुनुहुन्थ्यो । उहांँ थारु कल्याणकारिणी सभा कैलालीका उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो । लामो समयदेखि शैक्षिक क्षेत्रमा समेत आबद्ध चौधरीको निधनले टीकापुरबासी शोकाकुल भएका छन् । घाइते मध्ये चार जनालाई गम्भीर अवस्थामा रहेका छन ।
गाडी चालक अत्तरिया नगरपालिका ९ का धर्मसिंह पुजारा, लम्कीचुहा नगरपालिकाका वर्ष ५ का सीता विक, बांकेका ५० वर्षिया बालकुमारी मल्ल, जानकी गाउँपालिका वडा नंं १ का ६० वर्षिया रामकुमारी सुनारलाई गम्भीर चोट लागेको इलाका प्रहरी कार्यालय टीकापुरले जनाएको छ ।
चारै जनालाई थप उपचारका लागि टीकापुर अस्पतालले नेपालगञ्ज रेफर गरेको छ । अन्य १२ जना सामान्य घाइते भएका प्रहरीले जानकारी दिएको छ । घाइतेहरुको टीकापुर अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । गाडीमा चालक सहित १७ जना रहेका प्रहरीले बताएको छ । बसले ओभरटेक गर्न खोज्दा दुर्घटना भएको प्रहरीले जनाएको छ ।